Guddiga Arimaha Bulshada ee Golaha Shacabka oo Ardayda imtixaanka galaysa u ballan qaaday waxbarasho dibadda ah – Kalfadhi
Guddiga Arimaha Bulshada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeeray qaar kamid ah goobaha ay imtixaanka ku gelayaan ardayda Soomaaliyeed ee sanadkaan ka baxaya dugsiga Sare islamarkaana maalintii 3aad u fadhiya imtixaanka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga Arimaha Bulshada ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cali Cusmaan Xirsi iyo Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi ayaa u sheegay ardayda imtixaanka galeyso in waxbarasho dibadda ah ay dowladda Soomaaliya u raadin doonto kuwaada gala kaalmaha hore ee imtixaanka.
Guddiga goobaha ay booqdaan waxay isugu jiraan keydadka imtixaanka aan wali la gelin iyo Iskuulo ay ka socdaan imtixaanka oo ay ku sugnaayeen ardayda u fadhida imtixaanka Dowladda oo maanta socda maalintii 3aad.
“Waxaan idin rajeynayaa guul waxaana idin kula dardaarmayaa in aad dadaashaan dulqaadna aad yeelaataan waayo waxkasta waa adagyihiin hadii la adkeesto laakiin hadii la fududeesto waa fududyihiin” ayuu yiri Xildhibaan Cali Cusmaan Xirsi oo ah Guddoomiyaha Guddiga.
Xildhibaan Cali Cusmaan Xirsi ayaa ardayda u ballan qaaday in ka Guddi ahaan ay ku dadaali doonaan sidii waxbarasho dibadda ah ay u heli lahaayeen ardayda Soomaaliyeed kuwooda kaalmaha ugu soo horreeya ka gala imtixaanka Dowladda Soomaaliya qaadayso ardayda Class-ka 12-aad ee dugsiga Sare.
“Hadii aad kaalmaha soo tiigsataan waxaa heli doontaan waxbarasho dibadda ah oo tayo leh” ayuu yiri Guddoomiyaha Guddiga Arimaha Bulshada ee Golaha Shacabka Xildhibaan Cali Cusmaan Xirsi.